Project Airbus A321 engines mechie mgbe takeoff 3 afọ 4 ọnwa gara aga #223
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: egwuregwu
Project Airbus A321 engines mechie mgbe takeoff 3 afọ 4 ọnwa gara aga #224
Project Airbus A321 engines mechie mgbe takeoff 3 afọ 4 ọnwa gara aga #225
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: Gh0stRider203, JonesyMcJonesFace
Project Airbus A321 engines mechie mgbe takeoff 3 afọ 4 ọnwa gara aga #226
Project Airbus A321 engines mechie mgbe takeoff 3 afọ 4 ọnwa gara aga #227
Mba, ọ naghị arụ ọrụ. M ka nwere otu njehie "Generator 1, Generator 2 na Hydraulics 1 # 2" na-acha ọbara ọbara na ngosi ngosi.
Project Airbus A321 engines mechie mgbe takeoff 3 afọ 4 ọnwa gara aga #228
Project Airbus A321 engines mechie mgbe takeoff 3 afọ 4 ọnwa gara aga #229
"Ndị ọzọ atọ edoziri ON. (Sec 2,3 na FAC2)"
Ha nọ na mgbe "OFF" adịghị egosi.
Project Airbus A321 engines mechie mgbe takeoff 3 afọ 4 ọnwa gara aga #230
Project Airbus A321 engines mechie mgbe takeoff 3 afọ 4 ọnwa gara aga #234
Dariussssss dere, sị: Obi dị ụtọ ịhụ nke a edozi. Ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ọ bụla ọzọ, ka anyị mara.
Oge ike page: 0.270 sekọnd